N'ike mmụọ nsọ Satọde | Martech Zone
Nwam, Bill, na - eduga n'ichepụta ụda maka arụmọrụ nke ụlọ akwụkwọ sekọndrị ya nke Ọkachamara nke Oz. Nwa m nwanyị ga-anọkwa n'ime ya, na-akpọ otu Munchkin. Katie na-enwetara ụfọdụ nlele ndị na-egwu egwu… dị ezigbo mma ebe ọ bụ naanị na Middle School! Ọ bụụrụ ya oke ike ịnweta egwuregwu ahụ. Otú ọ dị, ọ hụrụ ya n'anya n'ezie. Ọ na-eju m anya mgbe niile na talent ụmụ m abụọ.
Dịka ị pụrụ iche n’echiche, ụbọchị m na abalị m juputara na abụ sitere na Ọkachamara nke Oz. Nwa m nwoke edeghachila "Ọ bụrụ na m nwere Obi" na ụdị ọgbara ọhụrụ a. O mebeghị ya n'èzí ụlọ, n'agbanyeghị. Achọrọ m ịkpali ya ntakịrị ka ọ bulie ụbọ akwara wee kpọọ ya n'oge ezumike na omume taa.
Mgbe m hụrụ vidio a na 3R.e.Medium, egosiri m ya ya ma kpalie ya iweta ụbọ akwara ya na mmegharị taa. Nwa m nwoke enweghi nsogbu ilele igwe mmadu not mana obughi igwe mmadu n’amaghi ihe na-abia. Cheedị ịme na ụzọ ụgbọ oloko Paris! Nke ahụ bụ ihe ndị a incredibly nkà folks mere: